true drugs /zu-ZA/tools-for-life/drugs/steps/why-people-take-drugs.html read 6 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/drugs_zu_ZA.jpg Izimpendulo Kwizidakamizwa
Ngemuva kokuthi umuntu aqede ukuhoxa ngempumelelo, ulungele isinyathelo esilandelayo.
Lesi sinyathelo sibizwa ngokuthi Uhllelo lwe-Purification.
I-Purification isho isenzo sokwenza umuntu abe msulwa emzimbeni ngokususa izidakamizwa nezinye izinto ezinobuthi emzimbeni. Izinto ezinobuthi ziyizidakamizwa, amakhemikhali noma enye into ekhonjisiwe enobuthi noma eyingozi empilweni. Igama elithi ubuthi livela kwelesi-Greek elithi toxikon, ekuqaleni elalisho ubuthi lapho imicibisholo yayicwiliswa khona.
Uhlelo icebo lezinqubo kanye nemisebenzi okumele ilandelwe.
Uhlelo lwe-Purification lwenziwa yinoma ngubani oke wahoxa ngempumelelo kwizidakamizwa. Kwenziwa ngumuntu okungenzeka ukuthi wayeka ukuthatha izidakamizwa esikhathini esithile esedlule. Umuntu akadingi ukuthi abe ancike ezidakamizweni ukwenza lolu hlelo. Lungenziwa yinoma ngubani owake wasebenzisa izidakamizwa noma izidakamizwa ezinobuthi emzimbeni wakhe—okusho namuhla cishe wonke umuntu.
Izidakamizwa, imfucumfucu enemisebe namakhemikhali azo zonke izinhlobo zitholakala yonke indawo namuhla. Ngokwesibonelo, ezinye zezivikelo ezifakwe kwimifino ekheniwe noma kwisobho kungenzeka ukuthi zinobuthi. Ukutholwa kubukeka sengathi kuyakuqinisekisa ukuthi amakhemikhali abhekela emoyeni ukunikeza iphunga elimnandi esitolo sendawo anobuthi empeleni futhi angagcina esekudleni okuthengiswa lapho. Ama-painkiller kanye nama-sedatives atholakala kabanzi. Ama-pesticides kanye nobunye ubuthi kutholakala emkhathini. Amakhemikhali wezezimboni nezolimo asetshenziswa ngokwengeziwe. Bese kuba nezidakamizwa ezingekho emthethweni ezibandakanya insangu, i-LSD, i-cocaine nezinye izidakamizwa zasemgwaqweni. Lezi futhi, kunjalo, ziyingozi empilweni.
Isibalo sezinto ezinobuthi ezithinta abantu namuhla sidale inkinga ye-biochemical.
I-Biochemical isho ukusebenzisana (isenzo noma ithonya labantu noma izinto komunye nomunye) kwefomu yempilo nezinto zamakhemikhali.
I-Bio isho impilo, yezinto eziphilayo; kusuka ku-Greek bios, impilo noma indlela yokuphila.
Amakhemikhali achaza okuphathelene namakhemikhali.
Amakhemikhali ayizinto, ezilula noma eziyinkimbinkimbi, okuyizinto zokwakha izinto. Umzimba womuntu uqobo wakhiwa ngamakhemikhali namakhemikhali e-compound. Izinqubo zamakhemikhali eziyinkimbinkimbi, okusho ukuthi izenzo eziqhubekayo noma izinguquko, ziyaqhubeka ngaphakathi kuso ngaso sonke isikhathi. Kepha izinto ezinobuthi zingavimba noma ziguqule lezi zinqubo zomzimba wemvelo. Zingawenza umzimba ugule noma ziwubulale.
Ngakho ke i-detoxification yisenzo sokususa izinto ezinobuthi kokuthile, njengomzimba womuntu.
Njengoba sibonile ekuqaleni kule nkambo, hhayi i-LSD kuphela kepha ubuthi obunamakhemikhali kanye nobuthi, kubandakanya izithako zokugcina izidakamizwa, ukubulala izinambuzane, izidakamizwa zokwelapha nezidakamizwa zasemgwaqweni (i-heroin, insangu, i-cocaine, njll.) zingahlala kwizicubu zomzimba iminyaka. Uma nje lezo zinto zihlala emzimbeni, zingadala i-restimulation yezithombe zengqondo eziqoshwe emqondweni womuntu lapho ezithatha. Le-restimulation inganciphisa ukuqaphela kwakhe kanye namakhono akhe. Lapho izidakamizwa nobunye ubuthi bususwa emzimbeni, azisekho ukuze zi-restimulate umuntu.
Uhlelo lwe-Purification lususa umuntu ezidakamizweni nakwezinye izinto ezinobuthi ezakhe emzimbeni. Uhlelo, olubhekelwe kakhulu, lufaka okulandelayo:
Umsoco, kufaka phakathi ama-vitamins, ama-minerals njll., kanye namafutha
Uhlelo lomuntu siqu oluhlelwe kahle.
Ukuzivocavoca: Umuntu uqala usuku ngalunye lohlelo ngokugijima. Inhloso yokugijima akuyona ukwenza umuntu ajuluke kodwa ukwandisa ukuhamba kwegazi. Igazi lijula ​​lisiya emisipheni nakwizicubu ukuze izinsalela ezinobuthi ziphuke futhi zikhishwe.
Ukujuluka kwi-sauna: Ngemuva kokugijima, umuntu ungena kwi-sauna ngokujuluka. Ubuthi manje sebungashiya umzimba budlule kwizimbotshana.
Umsoco (kufaka phakathi ama-vitamins nama-minerals kanye ne-oyili): Uma sikhuluma ngomsoco asikhulumi ngokudla kuphela, kodwa ngama-vitamins nama-minerals futhi. Asikhulumi nokho nge-“diet.” Umuntu udla lokho ajwayele ukukudla. Kufanele aqiniseke ukuthi uthola imifino eminingi emisha nokuthi imifino ephekiwe ayidlayo ayivuthiwe ngokweqile. Ubuye athathe ama-vitamins nama-minerals nsuku zonke.
Uwoyela uthathwa ngoba izinto ezinobuthi zibanjwa ikakhulu (kepha hhayi kuphela) kwizicubu zomzimba ezinamafutha. Umzimba cishe uzobambelela kokuthile okushoda kukho. Uma uzama ukuqeda okuthile kuyinto eshoda ngakho, ngeke ikudedele. Kepha uma lowo muntu ethatha amanoni athile ngohlobo lwamafutha, umzimba ungashintshanisa amanoni amabi ngamafutha amahle angenazinsalela ezinobuthi. Leyo inkolelo eyisisekelo.
I-Niacin, i-vitamin B complex, idlala indima ebaluleke kakhulu empumelelweni yohlelo futhi kufanele kukhulunywe ngokukhethekile.
I-Niacin ingakhiqiza imiphumela emihle kakhulu uma ithathwa kanye namanye ama-vitamins nama-minerals adingekayo ngamanani afanele. Kubukeka sengathi kuyaqhuma futhi kudedele izinsalela zezidakamizwa ezicutshini nakumaseli omzimba. Umuntu uthatha i-niacin cishe ngesikhathi agijima ngaso, ukuze kuthi lapho engena kwi-sauna ngokushesha nje ngemuva kokugijima, izidakamizwa nezinye izinto ezinobuthi ezikhishwe yi-niacin zikhishwe emzimbeni ngokujuluka.
Uhlelo lomuntu siqu oluhlelwe ngokufanele: Kubalulekile ukuthi umuntu oqale kulolu hlelo anamathele kukho ngokunengqondo futhi angaqedi izinsuku noma akwenze ngendlela engahambelani. Kubalulekile ukuthi alale ngokwanele. Uma enza uhlelo ohlelweni oluhlelwe kahle, uzothola imiphumela ephelele ohlelweni.
Uhlelo lwe-Purification aluzibeki esikhundleni sezenzo ezichazwe ekuqaleni kule nkambo kulabo abasanda kuphuma ezidakamizweni. Uhlelo luzokwenziwa kuphela ngemuva kokuthi lezo zinyathelo zokuqala ziphothuliwe.
Njengoba umuntu ekhipha ubuthi emzimbeni wakhe, ukuthuthuka kufanele kubonakale esimeni sakhe somzimba. Umphumela ungumzimba o-purified. Kodwa-ke, inhloso Yohlelo lwe-Purification akuyona ukusingatha umzimba.
Uhlelo lwenzelwe ukwenza kwenzeke ukukhulula lowo muntu ngokomoya.
Umuntu akuwona umzimba wakhe noma ingqondo yakhe, kodwa uyisidalwa esingokomoya. Leli iqiniso eliyisisekelo elatholakala kwi-Scientology . Umuntu ongokomoya ongumuntu ngamunye waziwa njenge-thetan. Leli gama livela encwadini yesi-Greek ethi theta okusho ukuthi umcabango noma umoya. I-thetan akuyona into onayo; inguwe. Unayo ingqondo futhi unawo umzimba, kepha uyi-thetan. I-thetan isebenzisa ingqondo ukumsiza ukuthi axhumane futhi alawule izinto ezimzuzungezile.
Kutholakale ukuthi umuntu osebenzise izidakamizwa akakwazi ukuthola inkululeko enkulu njengesidalwa esingokomoya—okuwumsebenzi we-Scientology. Izithombe zengqondo zalezi zinto ezinobuthi, inqobo nje uma lezo zinto zisemzimbeni, zingaku-restamulate i-thetan. Lapho sezihambile emzimbeni, i-restimulation e-constant ingayeka. Ngakho ke Uhlelo lwe-Purification empeleni luyisenzo esingokomoya. Kukhulula umuntu emiphumeleni e-restimulative yezidakamizwa nobunye ubuthi. Nalokho kuphume endleleni, manje useyakwazi ukulandela indlela yokuthuthuka ngokomoya.
Emahoreni amahlanu ngosuku umuntu kufanele akwazi ukungena kulo lonke uhlelo emavikini amathathu kuya amane. Abanye bazothatha okuningi kanti abanye bazothatha okuncane. Kungakhathalekile ubude, Uhlelo lwe-Purification lukuhlinzeka ngendlela yokuthatha igxathu elibalulekile lokuya empilweni engenabungozi, engenazo izidakamizwa.
Uhlelo lwe-Purification luyatholakala ngaphansi kokugadwa ngochwepheshe kuma-Organizations e-Scientology kanye nama-Missions emhlabeni jikelele. Incwadi Ethi-Clear Body, Clear Mind: Uhlelo lwe-Purification Olunempumelelo ilandisa ngendlela lolu hlelo olusebenza ngayo futhi ichaza zonke izinyathelo zalo.